Public Health Concern बजारमा छ्यापछ्याप्ती सिरिन्ज चक्लेट !साबधानी अपनाउने हि कि ? – Public Health Concern
हिजोआज बजारमा अनेकौं थरीका बच्चाहरुलाई फकाउन होस या भुल्याउन केही खेलौना सहित त केही तेसै, केही सादा त केही विभिन्न रङहरुमा तपाई हाम्रा घर ,चोक तथा बजारहरुका पसल पसलमा चक्लेटहरु पाईन्छ ! यस्ता चक्लेटहरुले बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने त प्रायः निश्चित नै छ संगै जीवन लाई तहसनहस पार्ने सम्मका नकारात्मक असर पनि चक्लेटहरुले गर्दछ्न ! बच्चा रोयो, भनेको मानेन, भुल्याउनु पर्यो आदि थुप्रै बिषयमा हाम्रा बच्चा चक्लेटको सिकार मा छ्न ! अनि पछि लत बस्छ र बच्चाले हरेक पटक पहिला चक्लेट को डिमान्ड गर्छ अनि अन्य !
अब कुरा गरौं सिरिन्ज चक्लेटको :
अहिले बजारमा नयाँ चकलेट देखा परेको छ । सिरिन्ज भित्र जेल राखेको चकलेट । यसको मूल्य ५ रुपैंया छ । के ५ रुपैंयामा नयाँ सिरिन्ज पाउँछ होला त ? बच्चाहरुले यस्तो चकलेट खाएको कति को राम्रो हो ? यो सिरिन्ज कहाँबाट आएको ? यसको प्रयोग कतिको सुरक्षित छ ? पसलेहरुले यस्तो चकलेट बेच्नु बच्चाहरुको लागि कतिको हितकारी छ ? अभिभावकहरुले यस्तो चकलेट किनेर बच्चाहरुलाई खुवाउनु कतिको राम्रो हो ? यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिने एक महत्त्वपूर्ण सर्जिकल सामाग्रीमा फास्ट फुड प्याकिङ गरि कसरी निर्यात भयो ? यावत बिषयका प्रश्नहरु अनुत्तरित छ्न !
अहिले बजारमा देखिएको सिरिन्ज चक्लेट
यो चकलेटको आयात भारतको नयाँ दिल्लीबाट भएको रहेछ । नेपाली बजारमा अब मौलाउन थालेको छ ।
जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता चकलेट कहाँ कसरी र किन बिक्रि भै रहेछ्न भन्ने बारे बेलैमा सम्बन्धि पक्ष जानकारी हुन र नियमन निकायले अनुगमन तथा भेरिफाईड गर्न जरुरी छ !
तपाईंले पढ्नु भो ? अब जन हितको लागि एक शेयर गर्न नभुल्नु होला !